Eritariya maxay ka qortey socdaalkii wasiirkeeda ee Hargeysa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Eritariya maxay ka qortey socdaalkii wasiirkeeda ee Hargeysa
Waxa shalay dhamaadey socdaal aan hore loo shaacin oo wasiitka arimaha dibedda Eritariya uu ku tagey Hargeysa, halkaas oo uu jogey muddo laba maalmiid uyo badha. Wasiirka ayaa sheegay inuu u yimi inuu arko sida xaal wax yahay maamulka Somaliland.
Hadaba dad badan ayaa wax iska weydiiyay waxa keenay socdaalkan aan hore loo shaacin oo markiiba farta lagu fiiqay in Imaaraadku wato, asagoo ku xumaynaya Jabuuti kadib markii madaxweynaha Jabuuti booqdey Muqdisho. Imaaraadka ayaa Eritariya u adeeganaya danahiisa ka rabanna inay ictiraafaan.
Warbaahinta aan xorta ahayn ee dalkaasi ayaa qortey in socdaalku qayb ka yahay isbedelka uu bilaabay Cabi Axmed ee lagu raadinayo naba,waarta iyo iskaashi ka dhaca geeska. Waxyna yiraaheen in kulan kale oo wasiirku la yeeshay Muuse Biixi lagu falanqaayey wax laysku ogaa kulankii u horeeyay. Ma sheegin waxa ay isla ogaayeen ama ka wada hadleen kulankaa hore ee dhacay markii wasiirku yimi.
Eritariya oo ka soo baxdey go’doon ayaa raadinaysa inay siyaasad ku yeelato geeska una adeegto danaha Imaaraadka inkastoo ay yartahay waxa ay soo kordhin marto iyada lafteedu.
Dhinaca kale saxaafada Itoobiya ayaa iyaguna kulanka ku sheegay mid Cabi Axmed watey oo weftiga Eritariya ku amaaneen kaalinta uu ka qaatey xalinta muranka labadooda dal.
Argagixiso lagu soo bandhigey Baardheere
Sirdoonka qaranka ee afka qalaad lagu soo gaabiyo ...